The Con-Heartist (2020) | MM Movie Store
ဒီနပေဲ့ Netflix ကနေ ထှကျရှိလာပွီး GDH မှ ရိုကျကူးထားတဲ့ ဟာသကားလေးတဈကားနဲ့ မိတျဆကျပေးပါရစအေီနာ ဆိုတဲ့ ကောငျမလေးက Youtuber တဈယောကျပါဒါပမေယျ့ တဈနတေ့ော့ သူမဆီကို အခှနျဌာနရဲ့ အရာရှိဆိုသူ(တာဝါ)ဆီမှ ဖုနျးတဈကောလျ ဝငျလာခဲ့ပါတော့တယျ….
အဲ့နောကျမှာတော့ အလိမျအညာ တဈခုဆိုတာ အီနာ တဈယောကျ သိလိုကျရပွီး ဆိုရှယျမိဒီယာပျေါ တငျ၍ အရှကျခှဲမညျဟုတျ ခွိမျးခွောကျပါတော့တယျဒါပမေယျ့ အီနာ့ဘဝမှာ အကွှေးတှေ ပတျခြာဝိုငျးနတောကို ထဝေါ တဈယောကျ သိထားတော့ အပေးအယူတဈခု လုပျလိုကျပါတော့တယျ….
အဲ့ဒီအပေးအယူကတော့ အရငျက ရညျးစားဟောငျး ဖွဈသူ ပတျ ကိုလကျစားခပြေေးဖို့ပဲ ဖွဈပါတယျပတျ ဆိုတဲ့ ကောငျလေးက အီနာ နဲ့ ရညျးစားဖွဈတုနျးက ခြေးခဲ့တဲ့ ငှကေို ပွနျမဆပျခဲ့ရုံတငျမက အီနာ့ကို အကွှေးတှေ ပတျခြာလညျ နဲ့ ထားသှားခဲ့ခွငျးဖွဈပါတယျ..
ထိုကိစ်စကို အခဲမကဖြွေဈနတေဲ့ အီနာတဈယောကျ ကြှမျးကငျြ လူလိမျသမား ဖွဈတဲ့ ထဝေါ နဲ့ ပူးပေါငျးကာ ရညျးစာဟောငျးဖွဈသူ ပတျဆီကနေ ငှပွေနျလိမျယူဖို့ plan တဈခု
ကွံခဲ့ပါတော့တယျ….အဲ့ဒီနောကျ ဘာဆကျဖွဈမလဲ?အီနာ နဲ့ ထဝေါ တို့ရဲ့ plan ကရောအောငျမွငျသှားမလား?
ရညျးစားဟောငျးဖွဈသူ ပတျဆီကနေ ငှတှေေ ပွနျလိမျနိုငျမလား?ဆိုတာ စောငျ့မြှျောကွညျ့ရှုလိုကျရအောငျဗြ…
ထဝေါ အဖွဈ Nadech Kugimiya
အီနာ အဖွဈ Baifern Pimchanok
ပတျ အဖွဈ Bank Thiti
ဒီနေ့ပဲ Netflix ကနေ ထွက်ရှိလာပြီး GDH မှ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဟာသကားလေးတစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေအီနာ ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးက Youtuber တစ်ယောက်ပါဒါပေမယ့် တစ်နေ့တော့ သူမဆီကို အခွန်ဌာနရဲ့ အရာရှိဆိုသူ(တာဝါ)ဆီမှ ဖုန်းတစ်ကောလ် ဝင်လာခဲ့ပါတော့တယ်….
အဲ့နောက်မှာတော့ အလိမ်အညာ တစ်ခုဆိုတာ အီနာ တစ်ယောက် သိလိုက်ရပြီး ဆိုရှယ်မိဒီယာပေါ် တင်၍ အရှက်ခွဲမည်ဟုတ် ခြိမ်းခြောက်ပါတော့တယ်ဒါပေမယ့် အီနာ့ဘဝမှာ အကြွေးတွေ ပတ်ချာဝိုင်းနေတာကို ထေဝါ တစ်ယောက် သိထားတော့ အပေးအယူတစ်ခု လုပ်လိုက်ပါတော့တယ်….
အဲ့ဒီအပေးအယူကတော့ အရင်က ရည်းစားဟောင်း ဖြစ်သူ ပတ် ကိုလက်စားချေပေးဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်ပတ် ဆိုတဲ့ ကောင်လေးက အီနာ နဲ့ ရည်းစားဖြစ်တုန်းက ချေးခဲ့တဲ့ ငွေကို ပြန်မဆပ်ခဲ့ရုံတင်မက အီနာ့ကို အကြွေးတွေ ပတ်ချာလည် နဲ့ ထားသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်..
ထိုကိစ္စကို အခဲမကျေဖြစ်နေတဲ့ အီနာတစ်ယောက် ကျွမ်းကျင် လူလိမ်သမား ဖြစ်တဲ့ ထေဝါ နဲ့ ပူးပေါင်းကာ ရည်းစာဟောင်းဖြစ်သူ ပတ်ဆီကနေ ငွေပြန်လိမ်ယူဖို့ plan တစ်ခု
ကြံခဲ့ပါတော့တယ်….အဲ့ဒီနောက် ဘာဆက်ဖြစ်မလဲ?အီနာ နဲ့ ထေဝါ တို့ရဲ့ plan ကရောအောင်မြင်သွားမလား?
ရည်းစားဟောင်းဖြစ်သူ ပတ်ဆီကနေ ငွေတွေ ပြန်လိမ်နိုင်မလား?ဆိုတာ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်ဗျ…
ထေဝါ အဖြစ် Nadech Kugimiya
အီနာ အဖြစ် Baifern Pimchanok
ပတ် အဖြစ် Bank Thiti